XOG: Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo maanta RW Xasan Cali Kheyre kala hadlay arrimo Xasaasi oo ay maamul goboleedyada ka mid yihiin | HalQaran.com
XOG: Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo maanta RW Xasan Cali Kheyre kala hadlay arrimo Xasaasi oo ay maamul goboleedyada ka mid yihiin
Muqdisho (Halqaran.com) – Magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan ku wada yeeshay Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Kulanka ayaa looga hadlay xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya iyo sida ugu haboon ee dowladda Federalka Soomaaliya iyo dowlad Goboledyada u wada shaqeyn karaan.
Bogga Twitterka ee Hawlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu daabacay in Saraakiisha Mareykanka ah ay Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya kala hadleen xaalado kala duwan oo ay hadda ku jirto Soomaaliya.
Waxyaabaha ay kala hadleen waxaa ka mid ah sidii horumar looga sameyn lahaa nabadda, xasiloonida, Iskhaashi u dhaxeeya dowladda Federaalka ah iyo dowlad Goboleedyada iyo Beesha Caalamka ee taageerta Soomaaliya.
Safiirka Mareykanka ayaa soo jeediyay si loo helo xasilooni siyaasadeed oo dalka ka hana qaado in loo baahan yahay siyaasad wadaag ah in dowladda ay soo bandhigto.
DF Soomaaliya ayaa khilaaf adag wuxuu kala dhaxeeya Maamul Goboledyada Jubbaland iyo Puntland, iyadoo hadda Galmudug ay ka taagan tahay xaalad doorasho oo qalafsan.
kulan xasaasi ah yeeshay